10 Kuvandudza Kwaunogona Kuita Kwekushambadzira Kwemagariro Nhasi! | Martech Zone
Chipiri, February 3, 2015 Chitatu, June 24, 2020 Douglas Karr
Chikamu chiri kukura che inbound kushambadzira kuedza isu kuendesa kumakambani anosanganisira ese akabhadharwa uye ehupenyu magariro midhiya mazano. Ini ndinogara ndichirohwa panhau dzakaenderera dzekuti vezvenhau havasi kuwana kudzoka kune inivhesitimendi iyo makambani ari kutsvaga kumwe kunhu. Mukutendeseka kose, ndinofunga imhaka yekushayikwa kwekuurayiwa uye zano rakanaka, kwete iyo yepakati. Isu tinoramba tichiona kukura mukushambadzira kwenzanga uye zvave zvichishamisa zvisingaite mukutyaira kwedu mutengo nemutungamiri pasi pese.
Negore Idzva kunouya Zvisarudzo zveGore Idzva. Pamwe chako chiri kuenda kunzvimbo yekurovedza muviri, kudzidza mutauro mutsva kana kutozorora zvako. Chero zvingave zvisarudzo zvako pachako, pane mukana wakanaka wekuti maakaundi enhau enhau anogona kushandisa kutanga kutsva muNew Year, futi. Ndosaka takaisa pamwechete iyi runyorwa rwegumi masocial media resolution kuti uchengete yako brand munzira.
Heano gumi Optimization Matipi eSocial Media Kushambadzira
Shandisa Zvimwe Zviratidzo
Tsvaga Nguva Yako Yakakwana
Kwayedza Uchishandisa Zvekushambadzira Zvemagariro
Ita Kuti Zvako Zvinyorwa Zvifambe neVhidhiyo
Shandisa maHashtag kurudyi
Gadzirira Zvinyorwa zveMapuratifomu Akasiyana
Tumira Zvishoma Nezve Iwe
Master Mobile Kushambadzira
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa we Tailwind.
Tags: hashtagskushandiswa kwemifananidzokushambadzira munharaundazvemagariro midhiya zvemukatikubatana kwenhaupasocial media hashtagsmifananidzo yemagarirosocial media optimizationsocial media mapuratifomumagariro enhausocial media nguvapasocial media vhidhiyopasocial kushambadzirayemagariro vhidhiyo
Nyika Yekutengesa Zvemagetsi 2015